Qaabka Shumaca «Pennant» - Aasaaska Aasaasiga ah, Halbeegyada Qaabka | vfxAlert official blog
Qaabka laambadda «Pennant» - halka dabaysha suuqa «ka dhacdo»
Falanqaynta farsamada, qaabka "Pennant" wuxuu u shaqeeyaa sidii moodel sii socosho isbeddel ah - kiis gaar ah oo ka sii xoog badan qaabka " Wedge ". Hantida joogtada ah ee isbedeleysa, qaabkani wuxuu u dhacaa si isdaba-joog ah, waxaa loo hirgeliyaa si sax ah aragti ahaan, wuxuuna noqon doonaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah
Saldhig aasaasi ah
Muuqaalka "Pennant" macnaheedu waa isugeyn muddo-gaaban ah. Erayada fudud, tani waxay dhacdaa marka ay jirto isku dheelitir la'aan mugga suuqa leh mala awaal aad u firfircoon suuqana go'aan kama gaari karo muddada xad-dhaafka / iibsiga in muddo ah. Tani waxay dhacdaa kadib war culus ama marka laga saarayo mug ballaaran oo furan aagga heerarka qiimaha adag.
Haddii bullaacadda ama xammuulka "Pennant" guud ahaan lagu go'aamiyo isbeddelka, markaa jiifka "Pennant" wuxuu la mid yahay "Saddex-xagal" muuqaal leh, taas oo ah, waxay muujineysaa isu-dheelitirnaan suuq kumeelgaar ah oo iibsadayaasha / iibiyeyaasha oo leh faa'iido yar oo hadda jirta jihada. Hakad ka dib, suuqa waa inuu sii wadaa dhaqdhaqaaqa qiimaha oo ay weheliso isbeddelkii hore. Si aad u ganacsato, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso qaab la mid ah iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh waqtiyada sarreeya.
Falanqaynta farsamada waxay bilaabeen inay kala saaraan "Pennant" oo ah qorshe ganacsi oo gaar ah dhawaanahan: waxay leedahay xiriir "muuqaal" xoogan oo leh "saddexagalka" caadiga ah (aagagga taageerada / iska caabinta) iyo "Calanka" ("calanka" iyo "guddiga").
Si sax ah loo aqoonsado "qaraabada" noocan oo kale ah waa arrin aad u adag. Natiijo ahaan, tirooyinka "Pennant" iyo "Flag" waa in si isku mid ah looga ganacsadaa, iyo waxa dhici doona ka dib marka loo eego sagxadda "Saddex-xagalka" waxay kuxirantahay firfircoonida tirooyinka, halkan ma sameyn kartid la'aan falanqeyn dheeri ah ama ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah adeeg .
U adeegso dhaqanka ganacsiga
Nidaamka aasaasiga ah ee qaabeynta qaabka:
Kicinta qiimaha (isdabamarinta oo leh tiro badan, mala awaal wararka, iyo xoog kale oo suuqa ka dhaca).
Dareenka labaad waa dib u gurasho - kuwa sameeya suuqa ayaa macaash / lumis ka dambeeya kicinta koowaad waxayna furaan amarro cusub.
Muddo fidsan - baaxadda dhaqdhaqaaqa sicirka ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya.
Isbeddelkii weynaa waa la soo celiyey; ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee loo furay marxaladda labaad way xiran yihiin.
Waa inuu jiraa ugu yaraan 3-5 mowjadaha aagga “Guddi”; Burburka soohdinta qaabku waa inay dhacdaa kahor barta isgoyska xisaabinta. Haddii suuqa uu horay uga gudbay midka kore ee la xisaabiyey, laakiin gurigu sii socdo, dhammaan calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa la joojiyaa waxaana la sameeyaa falanqeyn cusub oo suuqa ah.
Tusaalooyin wax ku ool ah
Sixitaanka isbeddelka sida ku xusan nidaamka "Pennant" marwalba lama muujiyo. Waxa loola jeedaa? Nidaamkan garaafka ah ayaa si weyn uga daciifsan kan "Calanka" caadiga ah. Waad ku qiyaasi kartaa suurtogalnimada ka shaqeynta tusaalaha adoo ku ururaya daneynta ganacsi barta kala goynta, laakiin haddii shaxdu ay u janjeerto dhanka jihada hadda jirta, waxaa wanaagsan in laga boodo calaamadaha ganacsiga noocaas ah .
Istaraatiijiyadda ugu shaqada badan waa kala-soocida soohdimaha. Waxaan sugeynaa jebinta, hagaajinta qarka dambe ee aaga muhiimka ah (dib u tijaabintu waxay xoojineysaa calaamadda) waxaanna u fureynaa dhanka jihada jabsiga.
"Calamada" waa dhif si buuxda u shaqeeyo oo ay jirto wax dhibaato ah oo xisaabinta sax ah uu dhacayo. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho caqliga ganacsiga caadiga ah - tixgeli bartilmaameedyada heerarka Fibonacci, aagagga heerarka "wareega" (00, 50, iyo 100), max max / min maxalli ah. Waxaan marwalba raacnaa maaraynta lacagta iyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah !
Qaab-dhismeed sax ah ayaa si dhif ah looga helaa shaxanka, nooc gaagaaban ayaa u muuqda marar badan: dareenka ugu horreeya, 30-45% dib-u-soo-celin, iyo isbeddelku wuu sii socdaa. Waxaan ku xusuusineynaa: bartilmaameedyada ganacsiga ee tusaalaha waxaa laga xisaabinayaa barta jabitaanka, maahan bilowga sameynta "Pennant".
Waqtiga ugu yar ee dhaca wuxuu ku dhici doonaa heerka dhererka qaabka (ama ka sii wanaagsan, dhererka "Flagpole") barta jabsiga, kan ku xiga - oo ah dhererka 50-70%. Haddii ay jirto heer qiimahoodu xoogan yahay, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho calaamadaha binary otomaatig ah oo leh dhicitaan hoose - laga bilaabo heerkan illaa max / min qaabka oo dhan.
Marka jaantusku "u muuqdo" jihada isbeddelka, suurta galnimada ka shaqeynta qadiimiga ah ayaa yaraata. Xaaladdan oo kale, waxaan fileynaa dib-u-noqosho, ee maaha sii wadida isbeddelka.
Haddii "Pennant" ay ka muuqato kor u kaca, astaamaha dib u celinta xoog-dhexe ayaa u muuqda. Haddii hoos u dhac uu ka muuqdo kor u kaca iyo soohdinta uu jajaban yahay, calaamadaha ganacsiga ee daciifka ah ayaa tilmaamaya PUT-option.
Qaabku had iyo jeer macnaheedu waa kaliya sixitaanka suuqa hadda jira iyo midka muddada-gaaban ah. Muuqaalka waa in lagu xaqiijiyaa calaamadaha ganacsiga laba-geesoodka ah iyo dhaqdhaqaaqa mugga (oo ka sii fiican isweydaarsiga, laakiin waad daawan kartaa shilinta): inta lagu guda jiro guri ku dhex yaal qaabka, muggu waa inuu si tartiib tartiib ah u yaraadaa, oo uu u bilaabaa inuu koro kolba marka ay ku soo dhowaato xilliga burburka .
Kicis fiiqan ayaa ku dhacda jabitaanka, ka dib markaa sicirka badiyaa si dhakhso leh ayuu dib ugu soo noqdaa, gaar ahaan haddii ay jiraan miisaaniyado waaweyn oo lacag-suge oo suuqa ku jira. Qaabka loo qaadan karo inuu dhameystiran yahay, ugu yaraan 5-15 baararka ayaa loo baahan yahay, burburna waa inuu ku dhacaa dhamaadka "Pennant".
Soo Koobid… Xusuusnow, dhammaan talooyinka iyo qaababka ganacsi ee qaabku waxay khuseeyaan oo keliya suuqa xasilloon ama "caadiga ah", markii ay dhammaadeen mala-awaaladii dadka lacagta sameeya, ee lagu sameeyay calanka. Ilaa iyo inta ay jiraan waxyaabo soo jiidasho leh, ma jiraan wax hoos u dhac ah - inta badan qaababka ayaa been noqon doona. Istaraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa mid muddo-gaaban ah, ikhtiyaarrada ka dib burbur cad oo soohdimaha ah.
Dhammaan labada lammaane ee lacagta lagu shubo iyo 'cryptocurrencies' , qaabka "Pennant" ayaa si deg deg ah loo sameeyay, gaar ahaan xilliyada M15-M30. Iyada oo ku saleysan xaqiiqadan, waxay ku kasban kartaa faa'iido kaliya istiraatiijiyado dhexdhexaad ah iyo waqti-dheer laakiin sidoo kale kuwa intraday. Waxay u muuqataa marar badan, waxay ku siinaysaa calaamado ka badan kuwa deggan "Saddex-xagalka" ama "Calanka". Faa'iidooyinka waxaa lagu sameyn karaa bartanka isbeddellada, gaar ahaan suuqa dhacaya. Sidaa darteed, ganacsade kasta waa inuu awood u leeyahay inuu ka ganacsado qaabka.